September 2009 – Kyaw Kyaw Oo's Thoughts, Love and Hope
HIV and Cervical Cancer Vaccines, Do Muslims need for protection?
Posted on September 30, 2009 October 12, 2009 by kyawkyawoo
The news were medical breakthrough. Scientists are optimistic aboutanew HIV vaccines that may reduce the rate of infection… Read more HIV and Cervical Cancer Vaccines, Do Muslims need for protection?
Rashid Khalifa by Dr Bilal Philips
Posted on September 29, 2009 October 12, 2009 by kyawkyawoo
ဒေါက်တာရာရှစ် ခါလီဖာ မြန်မာလိုကွန်ပြူတာကပြောသောကုရအန်ဆိုတဲ့စာအုပ် လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အတော်ကြာကဖတ်ဖူးတယ်။ ဘာသာပြန်ပါ။ မူလသုတေသနလုပ်သူကဒေါက်တာရာရှစ် ခါလီဖာ ဖြစ်ပါတယ်။ အီဂျစ်နိုင်ငံသား ဇီဝကမ ဗေဒပညာရှင်ပါ။ အမေရိကန် မှာပညာ သင်ယူခဲ့ပါတယ်။
Eid Mubarak 2009 from Kyaw Kyaw Oo
Posted on September 17, 2009 October 12, 2009 by kyawkyawoo
Assla Mualaikum and Eid Mubarak,
Posted on September 16, 2009 November 15, 2009 by kyawkyawoo
ကျနော် ဆရာဦးစိုးလွင် ( ငြိမ်းချမ်းလျှပ်စစ်) ကိုလူခြင်းတော့မသိပါ။သို့သော်ဆရာရဲ့ http://www.quraninburmese.com ကျမ်းမြတ်ကုရအန် မြန်မာစာမျက်နှာကို ကျနော် blog စရေးကတည်းက link လုပ်ထားခဲ့ပါတယ်။ ကျမ်းမြတ်ကုရအနမြန်မာဘာသာပြန်နှင့်အတူ ဆရာဦးစိုးလွင်နဲ့ အခြားပညာရှင်များရဲ့ စာအုပ်များကိုအလွယ်တကူ pdf file download… Read more ကျမ်းမြတ်ကုရအန်မြန်မာဘာသာပြန်နားထောင်လို့ရပြီ
My Ramadan Photos
Posted on September 14, 2009 October 12, 2009 by kyawkyawoo